China Ezigbo ọnụ ahịa atọ ndị na-emepụta ihe ịsa ahụ na-arụ ọrụ & ndị na-ebunye - Huanyu Sanitary Ware
Home > Ngwaahịa > Isi ịsa ahụ > Isi ịsa aka > Ezigbo ọnụ ahịa ịsa ahụ na-arụ ọrụ atọ
Ezigbo ọnụ ahịa ịsa ahụ na-arụ ọrụ atọ
Nke a dị mma ọnụ ahịa ịsa ahụ na-arụ ọrụ atọ na-arụ ọrụ nke ọma, gburugburu ma dị mma n'ụdị, enweghị mmiri mmiri, gel silica dị elu, usoro electroplating, siri ike ma dịgidere, na-ewu ewu ma na-ere nke ọma.
China N'ogbe Good Price atọ na-arụ ọrụ ịsa ọnụ ahịa
anyị na-enye ezigbo ọnụ ahịa ịsa ahụ na-arụ ọrụ atọ dị elu chrome nwere akwụkwọ ikike afọ 2. mmiri mmiri silicone na-akwado gburugburu ebe obibi. Anyị etinyela aka na ngwa ịsa ahụ maka ihe karịrị afọ 10, ndị ahịa anyị nọkwa na mpaghara dị iche iche nke ụwa. Anyị na-atụ anya ịbụ onye mmekọ gị ogologo oge na China.
Ezigbo ọnụ ahịa ịsa ahụ na-arụ ọrụ atọ, ọmarịcha ma na-agbanwe agbanwe, dabara maka ụdị ụlọ niile dabara adaba maka ụlọ ịsa ahụ ọ bụla, n'agbanyeghị n'ụlọ, ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, ma ọ bụ ebe ndị ọzọ chọrọ akụrụngwa ịsa ahụ.
Multi-arụ ọrụ mmezi ọsọ atọ:
Nkwa eji eme ihe: Nwalee n'okpuru nrụgide mmiri 0.5MPa, gbaa mbọ hụ na isi ịsa ahụ ọ bụla nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma na-enweghị mgbapu ọ bụla.
Ihe nchịkọta dị ọkụ: Ezigbo ọnụ ahịa ịsa ahụ na-arụ ọrụ atọ, ndị na-emepụta ihe, N'ogbe, China, ọnụ ahịa, ụlọ ọrụ, ndị na-ebubata ya